သင့်ကို ၀န်မခံပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့ အချက်များ . . . (၁) ကိုယ့်ကို ငေးကြည့်ခံရတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ကိုယ့်ကိုငေးမောကြည့်ခံရတာကို မကြိုက်သူ တော်တော်ရှားပါတယ်။ဥပမာ – သင်ဟာချစ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လှလှလေးဝတ်ပြီး မိတ်ကပ်လှလှလေး ပြင်လာတယ် ဆိုပါတော့။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လျှောက်လာတဲ့သင့်ကို ပုရိသတွေ လည်ပြန်ကြည့်တာကို သာယာနေတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိူးမှာဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလှဆုံးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ဘေးဘီဝဲယာကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့ဘဲ သူများတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုမှာ ကြိတ် ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်လေ …။ (၂) အခြား အမျိူးသမီးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို မနာလိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဲဘဲကို တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်က ငေးကြည့်နေတာကို မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ထိုသို့သောအခါမျိူးမှာ မနာလိုစိတ်နှင့်ချစ်သူကို …
ဒီသမိုင်းလေးကို သိပြီးသကာလ “နောင်အခါ ကျွန်တော် ခါငှက်သား မစားတော့ပါ” ပြောင်ခေါင်းဒေသရဲ့ တောတောင်ထဲ ရောက်ချိန် မှာ ငှက်မုဆိုးတစ်ယောက်က လာရောင်းတာ.. တစ်ကောင်ကို ၃၀၀၀ – ကျပ်နဲ့ ခါငှက် ၂ ကောင်။ ၂ ကောင်ဆိုတော့ ၆၀၀၀ – ကျပ်ပေါ့။ ဝယ်မိတာ ကတော့ အသေကောင်တွေပါ …။ အဲဒီ ငှက်မုဆိုးကို ခါ – ကို ဘယ်လို ထောင်သလဲ အင်တာဗျူးမိတယ်။ သူတို့ပြောတာက ခါငှက်အထီး တွေကိုပဲ ထောင်လို့ရပါတယ်တဲ့ …။ MP-3 box ကို ဆိုင်ကယ် ဘက်ထရီလေးနဲ့ ချိတ် ၊ ခါငှက် အမရဲ့ …
လူဆယ်ယောက်ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက်၏ အသက်ကို ကယ်နိုင်ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ် ကျမ လုပ်ရမယ့် အပိုင်းကိုတော့ ကျမလုပ်ပြီးပြီ …။ သင့်အပိုင်းက်ို သင်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …။ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် …။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ် …။ ကဇွန်းဥ အဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ် …။ (၁) ညနှောင်းပိုင်း အစားအစာစားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ် …။ (၂) တပတ်တွင် ကြက်ဥ (၄) လုံးထက်ပို၍ မစားမိပါစေနဲ့ …။ (၃) ကြက်အဆီဘူးကို …
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင် သင်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လှတာနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာဟာ မတူညီပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လှတယ်ဆိုတာက ရုပ်ကလေးလှရုံ အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပြီးသော ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဆိုတာကတော့ သူမရဲ့အပြုအမူတိုင်းကို ငေးကြည့်နေချင်တတ်တာ၊ သူမပြောလိုက်တဲ့ စကားတိုင်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတတ်တာ၊ သူမရဲ့ စိတ်ထားလေးက ချစ်စရာကောင်းနေတတ်တာ စသဖြင့်ပေါ့ သူမလှုပ်ရှားပြုမူသမျှဟာ တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ကတော့ အရမ်းမခက်ခဲပါဘူး။ ဒီအပြုအမူလေးတွေက သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေမှာပါ နော် …. (1) ပွင့်လင်းတတ်တာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးအများစုက ပွင့်လင်းတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနေထိုင်တတ်တဲ့သူကို လူတိုင်းနီးပါး သဘောကျနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးတွေက တစ်ဖက်သားအပေါ် …
ကားစီးလျှင် မူးဝေတက်သူများအတွက် သိထားသင့်သည့် နည်းလမ်းများ ကားမူးခြင်းက လူတော်တော်များများ ကြုံလေ့ရှိသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကားမူးသော အကြောင်းရင်းက မျက်လုံးနှင့် အတွင်းနားတို့ ဟန်ချက်မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် …။ အတွင်းနားက ခန္ဓာကိုယ်ကရွေ့လျားနေသည်ဟု ဦးနှောက်ကို သတင်းပို့ပေးပါတယ်။ ကားစီးသည့်အခါ မူးဝေအော့အန်တတ်သောသူများက ကားမူးခြင်းကို သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများနှင့် ကားမူးခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းတွေကို သိထားသင့်တယ် … (၁) လတ်ဆတ်သောလေကို ရှူလိုက်ပါ။ လတ်ဆတ်သောလေက ကားမူးခြင်းကို သက်သာစေသောကြောင့် ကားပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်ရုံနှင့်မရပါက ကားပေါ်က ခဏဆင်းပြီး လတ်ဆတ်သောလေကို ရှူသွင်းလိုက်ပါ။ မြင်ကွင်းကို ပိတ်ထားပါ။ တခါတလေတွင် ကားအပြင်က ရွေ့လျားမှုကြောင့် ကားမူးခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကားသွားနေချိန်တွင် မျက်စိကို …
“နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ မင်း အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား?” တစ်နေ့ ၁၀၀၀ စု ၊ ၅ နှစ်ပြည့်ရင် သင့်လက်ထဲမှာ ၁၈ သိန်းပိုင်ဆိုင်နေပါပြီး ၊ ၁၈သိန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ကောင်းကောင်းတစ်ခုခု ထောင်နိုင်ပြီ …။ တစ်နေ့ ၂၀၀၀ စု ၊ ၅ နှစ်ပြည့်ရင် ၃၆ သိန်းရှိပြီ ၊ အချိန်တို အတွင်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူစာရင်း ဝင်နေလောက်ပြီး …၊ တစ်နေ့ ၃၀၀၀ စု ၊ ၅ နှစ်ပြည့် သိန်း ၅၀ ကျော် ၊ ဒါတောင်ဘာလို့ …
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသနိုင်တဲ့ဆေးနည်း
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသနိုင်တဲ့ဆေးနည်း လူ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နှလုံးတွေမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါတွေကိုအများဆုံး တွေ့ရှိရပြီး ထိုရောဂါတွေဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံကို သိန်းချီပြီး ကုန်ကျနိုင်မှသာ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ဝက်လောက် အောင်မြင်ကြတာပါ …။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားရပြီဆိုရင် တမြေ့မြေ့နဲ့ ခံစားရတဲ့ အပြင် ကျောက်ကပ်ကို ပုံမှန်ဆေးရင် ကုန်ကျတဲ့ ပိုက်ဆံက အရမ်းကို များပါတယ် …။ ဒီနေ့ကတော့ ဆရာဝန်တွေကတောင် လက်လျော့လိုက်ရတဲ့ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် …။ အဓိက ဆေးကတော့ ကင်းမုန်သီးပါ။ အိမ်ခြံစည်းရိုးတွေမှာ တွယ်တက်ပြီး ပေါက်နေတဲ့ ကင်းမုန်သီးပင်အများစုကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အများစုကတော့ ထိုအသီးကဘယ်လောက်ထိ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာကို …
ဘဝလက်တွဲဖော် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက်
ဘဝလက်တွဲဖော် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက် အချစ်ဆိုတာကတော့ ပြုလုပ်ဖန်တီးလို့ ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလူကို ချစ်ပါ ဟိုလူကို ချစ်ပါလို့ စေခိုင်းလို့မရပေမယ့်လို့ မှားယွင်းတဲ့လူကို မချစ်မိဖို့တော့ လိုတယ်နော်။ ကိုယ်က မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်လိုက်မိတဲ့အခါ အချစ်ထက် နာကျင်စရာတွေပဲ ကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်စရာတွေ ကြုံလာခဲ့ရင်တော့ အချစ်ဆိုတာကလည်း ဘယ်နားမှာကျန်နေခဲ့မှန်းမသိအောင် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် မချစ်မိခင်ကနေ ကြိုတင်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင်ရော ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ …? (၁) နောက်ကြောင်းရာဇဝင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကြောင်းဆိုတာက အဲဒီ့လူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ လက်ရှိချစ်နေတဲ့အချိန်ကပဲ အရေးကြီးတယ် အတိတ်က မလိုအပ်ဘူးဆိုပေမယ့်လို့ သူ့ရဲ့အတိတ်မှာ ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက …
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပါ ငါး အရိုးဆူးလျှင် အတော့်ကို ခံစားရခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် အခန့်မသင့်လျှင်ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေ ခွဲထုတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် …။ ဒါ့ကြောင့် ငါးအရိုးမဆူးလျှင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ် တွင်းကုထုံးလေးများကို ရသမျှစုစည်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေရာနည်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ် …။ (၁) သံပုရာသီးကို အခွံမာများခွါ၍ အလုံးကို သွားကြားထိုးသံဖြင့် အပေါက်လေးများ ထိုးဆွထား၍ခေတ္တမျှ ငုံထားပါ။ အရည်ကို တဖြေးဖြေး မျိုချပေးပါ။ အချဉ်ဓါတ်က ငါးရိုးများကိုတိုက်စားသွားပေလိမ့်မယ် …။ (၂) ငှက်ပျောသီး စားပါ။ ဘာငှက်ပျောသီးပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ် …။ …
စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများ၊ အကြွေးပတ်လည် ဝိုင်းနေသူများ၊ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေသူများ ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ကြည့်ပါ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေသူ များ၊ အ ကြွေး ပတ်လည်ဝိုင်းနေသူများ၊ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေသူများ ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ကြည့် ပါ။ အကျိုးထူးပါသည်။ ဦးရွှေအိုးဘုရား 1998 ခုနှစ်မှာ မိသားစု စီးပွားရေး ကျခဲ့တယ်။ အကြွေးတွေတင်ခဲ့တယ်။အကြွေးတင်တာက အကြောင်းမဟုတ် ။ တစ်လတစ်လ ပေးနေရတဲ့အတိုးက မသေး …၊ လကုန်ရင် အတိုးပေးဖို့ စိတ်ပူနေရပြီ ။ ကြုံဖူးသူများသိမှာ ပါ ။ အဲဒီဒုက္ခက တကယ်စိတ်ဆင်း ရဲစရာကောင်းပါသည် …။ အဲဒါနဲ့ 1999 မှာ အဘဆရာကြီး မင်းသိင်္ခရေးတဲ့ ဝါစိမ်းနီ …
This Year : 146830
Total Users : 441963
Total views : 1699432